Dowladda oo Is Hortaag ku samaysay Kulan ay Xildhibaano ku yeelan lahaayeen SYL Hotel – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Dec 18, 2017
War goor dhow na soo gaaray ayaa sheegaya in Xildhibaano ka tirsan Golaha shacabka oo lagu waday inay shir ku yeeshaan Hotelka SYL loo diiday inay ku shiraan, taasoo ka dambeysay amar ka soo baxay Wasiirka Amniga oo ahaa in aan shir la qaban karin, iyadoo aan warqad fasax ah laga heysan Hey’adaha Amniga iyo Gobolka Banaadir.
Maamulka Hotelka SYL ayaa la sheegay inay ku wargeliyeen Xildhibaanada in aanay fasax u qaban inay hotelka ku shiraan, waxaana qadadii kaddib ay ka soo dareereen Xildhibaanada, iyagoo aaday dhanka Villa Hargeysa.
Wararka qaar ayaa sheegaya in kulanka Xildhibaanada looga hadli lahaa sidii dib loogu furi lahaa kalfadhiga Baarlamaanka iyo xaalada siyaasadeed ee dalka ku soo kordhay.
Xildhibaanada Beesha H/gidir ayaa la sheegay inay kulamo la yeeshaan Xildhibaanada kale ee beelaha, si ay ugu qanciyaan inay taageeraan in aragti mideysan laga soo saaro xaaladii ka dhalatay hadalkii xeer Ilaaliyaha Guud iyo xarigii Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur.
Waxaa socda olole lagu saxiixayo soo jeedin ku aadan in dib loo furo kalfadhiga Baarlamaanka, waxaana la sheegayaa in xildhibaano ku dhow kontameeyo ay saxiixeen codsi ku aadan in dib loo furo Kalfadhiga Baarlamaanka..
Kulamo siyaasadeed ayaa ka socda xafiisyada madaxda dowladda iyo guryaha ay degan yihiin Xildhibaanada, waxaana wali jirin wax war ah oo ka soo baxay dhanka Xildhibaanada tan iyo saaka kulamada lahaa.
Wasiirka Dastuurka Oo Sharci Darro ku tilmaamay in Fasax lagu xiro Shirarka lagu qabanayo Muqdisho.